igama eliphikisayo - Online igama eliphikisayo - Ithuluzi Lokubala Ngezwi
Ukubala amagama kuyaziwa kakhulu ngabantu abakhokhelwa ukubhala. Imibhalo eminingi yezifundo inemikhawulo ethile yobude, kungaba amagama ayi-1 000 noma angama-80,000. Noma kungaba khona ukulinganiselwa ngezigaba noma amakhasi, okuvame kakhulu ukulinganisa lezi zinhlobo zezithiyo ngamazwi noma izinhlamvu. Ukuhlala ngaphakathi komkhawulo kubalulekile. Kukhona nesigaba esithile samanoveli ngenombolo yamagama. Ukubala amagama kunomlando omude oshukunyiswa izinhloso ezahlukahlukene. Kepha inhloso yokuqala yalezi zibalo kube ukuthuthukisa amagama ohlobo oluthile olufana namagama angavamile, ajwayelekile, awusizo, noma abalulekile anenhloso yokugcina yokukhiqiza izichazamazwi ekufundiseni nasekufundeni stenography, sipelingi, noma ukufunda kalula futhi ngempumelelo.
I-Wordcounter iyithuluzi elenza umsebenzi wokubala izinhlamvu, amagama, imisho, izigaba, namakhasi ngesikhathi sangempela, kanye nokuhlolwa kohlelo lolimi nokupela amagama. Phakathi kwemihlomulo yakhona ukuhlaziya ubuningi bamagama, lapho ungabona khona ukuthi yimaphi amagama owaphindayo ngaphezulu kuwo wonke umbhalo (okulungiselelwe ukwenza i-SEO enhle, ngokwesibonelo) futhi, ikakhulukazi, isitophuwashi ukulawula ukuthi kuthatha isikhathi esingakanani. Iyakwazi futhi ukukutshela ukuthi amagama amathekisthi akho aphinda kangaki, kanye nokwakhiwa kwamagama amabili noma amathathu ajwayelekile. Ukuthola amaphethini ngamasethi amakhulu okubhala kungaba nzima ukwenza ngesandla, kepha amakhompyutha angasiza. I-Word Counter kukusiza ukuthi uqale uhlaziye umbhalo ngokulingana kepha ukukubonisa amagama nemishwana esetshenziswa kakhulu.
Iziphequluli zewebhu zanamuhla zisekela ukubalwa kwamagama, futhi kunezinsimbi eziningi ezitholakala online, abanye abahleli bemibhalo banethuluzi lendabuko lokubala amagama nabo. Kunokwehluka okuncane futhi okukhulu kakhulu emiphumeleni yokubala kwamagama ekhiqizwe izinjini zokubala zamagama ezihlukile. Njengamanje, ayikho imithetho noma uhlelo oluchazayo ukuthi iziphi izinsimbi noma uhlelo okufanele lusetshenziselwe ukubala amagama, futhi amathuluzi ahlukile wokubala amagama asebenzisa amacebo awo kuwo. Ukuchazwa kwegama okuvame kakhulu ukuthi "izinhlamvu ezizungezwe igebe, ezidlulisa okushiwo okuthile," kepha izinhlelo ezahlukahlukene zifaka izincazelo ezihlukene entweni eyodwa.
Ukubala kwamagama kusetshenziswa iMicrosoft Word
Iningi labantu lithayipha imibhalo yabo kuMicrosoft Word, ithuluzi elijwayelekile kakhulu lokubala amagama. I-Microsoft Word Statistics ibheka yonke into ephakathi kwezikhala ezimbili igama, kungaba inombolo noma uphawu. Ngakolunye uhlangothi, iZwi alibandakanyi izibalo zalo zokubala kwamagama umbhalo kumabhokisi wombhalo noma bobunjwa, ngezinye izikhathi okungenzeka ukwengeza inani elikhulu lamagama ekubaleni kwakho kwamagama.
Amathuluzi wokubala amagama athile
Amathuluzi athile wokubala amagama anembe kakhulu kuneMicrosoft Word. Imvamisa, umsebenzisi angabona kuwe ukuthi ufuna ukubala izinombolo noma afake umbhalo osuka kwezinye izinto uye kwizibalo zokubala zamagama. Amathuluzi wokubala amagama amahle kakhulu anamathuba wokubala amagama ezihlokweni, ama-footer, amanothi, imibhalo yaphansi, imibhalo yaphansi, amabhokisi wombhalo, imilo, imibono, umbhalo ofihlekile, umbhalo embhalweni oshumekiwe futhi oxhumene. Futhi, banganikeza ukubalwa kwamagama ngenombolo enkulu yamafomethi wefayela.
Bathi ngenxa yalokhu umehluko ukubalwa kwamagama okhiqizwe amathuluzi athile wokubala amagama kuvame ukubalwa amagama / amayunithi kunokubalwa kwamagama eMicrosoft Word.
Izinhlelo zokusebenza zokubala amagama
Yize zingenayo imisebenzi eminingi njengezihumusho zedeskithophu, kukhona nezicelo zeselula zokubalwa kwamagama nezinhlamvu. Endabeni ye-Android, singasebenzisa iZwi Counter, uhlelo lokusebenza olula olubala amagama, izinhlamvu ezinezikhala, izinhlamvu ngaphandle kwezikhala nemisho.
Uhlelo lokusebenza lwe-iPhone luyisisekelo esengeziwe ngokwengeziwe, futhi isihloko saso sishiya ikamelo elincane lokungaqiniseki: Khombisa amagama, umlingiswa, noma ukubalwa kwezigaba, futhi yilokhu uhlelo lokusebenza olwenzayo, noma kungaphansi noma ngaphansi.
Izinhlamvu (azikho izikhala)
Isigwebo Eside Kakhulu (amagama)
Umusho Omfushane kakhulu (amagama)
I-Avg. Isigwebo (amagama)
I-Avg. Isigwebo (imigodi)
Isilinganiso. ubude begama
Isikhathi Sokubhala Ngezandla
I-Top10 I-Top20 I-Top30
Ithuluzi eliphikisayo lamagama online (C) Wordcounteronline.net
Sisebenzisa amakhukhi, nje ukulandelela ukuvakasha kuwebhusayithi yethu, asigcini imininingwane yomuntu siqu.